Yeyiphi eyona nkqubo ilungileyo yokuhlela ividiyo? | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | | Ihlaziywe 16/03/2022 11:27 | Idizayini yeMifanekiso, Ezahlukeneyo
Kweli nqaku siza kuthetha ngayo yeyiphi eyona nkqubo ilungileyo yokuhlela ividiyo, oku sizakwenza ukhetho lwezona nkqubo zisetyenziswa kakhulu.
Inkqubo yokuhlela iividiyo idla ngokuba yindinisa, kuba ifuna umsebenzi onobuchule ngumhleli, ukuthatha inkathalo egqithisileyo kwinyathelo ngalinye elenzayo, kwaye oku kufuneka ube nenkqubo yokuhlela ividiyo ehlangabezana neemfuno zakho.
Iividiyo zinokuhlelwa ukusuka ekhaya kwikhompyuter yethu okanye kwiselfowuni yethu, kodwa ukuba le nto uyikhangelayo luhlelo lobuchwephesha. ufuna iqela ngokutsho kwayo, kunye neprosesa enamandla, indawo yokugcina enkulu, ikhadi lemizobo elungileyo, kunye nekhadi le-RAM le-16GB.
1 Ukuthelekiswa kweenkqubo zokuhlela ividiyo
1.2 Ukugqibela kwePro Pro
1.3 DaVinci Qoxa
1.5 I-Wondershare Filmora
Ukuthelekiswa kweenkqubo zokuhlela ividiyo
Kwicandelo elilandelayo, siza kuthelekisa ezintlanu zesoftware yokuhlela ividiyo ekumgangatho ophezulu kakhulu phakathi kwabahleli kwaye sibonise izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo.
Yenye yeenkqubo zobuchule zokuhlela ividiyo kwi-Adobe suite. Ungayifumana ngokuhlawula umrhumo wokubhalisa, obophelela abasebenzisi kwiindleko eziqhelekileyo zenyanga okanye zonyaka, kodwa ngaloo ntlawulo ukongeza ukufikelela kumhleli wevidiyo, banokufikelela komnye umfanekiso wokudala kunye nezicelo zokuhlela isandi.
Ngokumalunga neziphumo ezikhethekileyo ezibonelelwa yi-Adobe Premier Pro, ishiyeka emva kwezinye iinkqubo zokuhlela ividiyo, kuba inakho. Ukucotha ukuba isisombululo sevidiyo siphezulu kakhulu, ngoko umzekelo iividiyo ze-4K, iprosesa elungileyo kunye nekhadi lemifanekiso liya kuba yimfuneko.
I-Adobe Premier Pro CC ithathwa njengenye ye eyona nkqubo yokuhlela ividiyo namhlanje kwaye usibonise ngeendlela ezahlukeneyo ezinokwenzeka malunga nemveliso yasemva.
Izinto ezilungileyo zeAdobe Premiere Pro CC
Iintlobo ngeentlobo zezixhobo zokufumana uhlelo lobuchwephesha
Iyahambelana nezinye ii-apps ze-Creative Cloud
Umhleli kuzo zombini iOS kunye Windows
Into kunye nesixhobo sokuchonga ubuso.
Ukungalungi kwe-Adobe Premiere Pro CC
Intlawulo yomrhumo wokufikelela kwi
Inokuba buvila kwimiphumo ekhethekileyo
Ingantlitheka ngesixa esikhulu sedatha
Inkqubo ekhethekileyo ye-macOS ke kunokubakho iingxaki zokuhambelana xa uyidlala kwiWindows.
Ngombulelo kwinkqubo yayo yethegi, ikuvumela ukuba uququzelele iiprojekthi ezinzima kakhulu. Inkqubo ikwanazo izixhobo zokuhlela umsindo kunye neziphumo ezibonakalayo, zonke zisebenza ngokufanelekileyo. Kungumxube phakathi kobona buchwepheshe buchwephesha kunye nobulula, ukuze ufikelele kuzo zonke iintlobo zabaphulaphuli, zombini iingcali kunye nabaqalayo.
Njengenye yesoftware yokuhlelwa kwevidiyo, inikezela ngesiseko sedatha esomeleleyo kwaye ihlala ikhulisa iphothifoliyo yayo yeempawu.
Izinto eziluncedo Final Cut Pro
Ukuphathwa okulula kunye nokuqondakalayo
Ukuhlelwa kwevidiyo ye-360 kunye nomgangatho womfanekiso ophezulu
Ukungalungi Final Cut Pro
Inokusetyenziswa kuphela kwi-macOS
Ayihambelani nezinye iinguqulelo zeFinal Cut
I-DaVinci Resolve ithathwa njengesixhobo sokwenyani sobuchule, kuba abanye abalawuli befilimu basebenza naye. Yinkqubo ejoliswe kubaphulaphuli abanolwazi lokuhlela.
Kukho inguqulelo yasimahla yeDaVinci Resolve 17, kufuneka uyikhuphele kwaye uyifake kwikhompyuter yakho. Ngakolunye uhlangothi, inguqulo ye-DaVinci Resolve Studio 17 ihlawulwe kwaye ijikeleze i-euro ye-300, kodwa kuyo sinokufumana yonke into esuka kwinguqulo yamahhala kunye neentlobo ezininzi zezixhobo.
Inkqubo yokuhlela, ukuba sisixhobo sobuchule, si iyahambelana neWindows, iLinux kunye neMacOS. Ivumela ukuhlela iifomati ezahlukeneyo, kunye nokukwazi ukuba nomboniso wemveliso. I-DaVinci Resolve iye yavela ngokuhamba kwexesha ukuze ibe liqonga elihle lokuhlela.
Izinto ezilungileyo zeDaVinci Resolve
Iyahambelana neWindows, Linux kunye ne-OS engaphezulu
inkqubo ezinzile kakhulu
Uluhlu olubanzi lwemisebenzi
Umsebenzisi-friendly interface kunye nemveliso preview
Ukungalungi kweDaVinci Resolve
Inkqubo yobungcali, kuyimfuneko ukuba nolwazi
Ifuna inkumbulo eninzi kunye nekhadi lemizobo elinamandla
Inguqulelo ehlawulweyo engakumbi
Inkqubo yenzelwe ukwenza iiklip ezimfutshane ngokulula, ngoko akuyomfuneko ukuba nolwazi lokuhlela ukulusebenzisa.
Enye yeenzuzo zale nkqubo kukuba ine-automation ngokusebenzisa iitemplates ukulungisa umbala, iaudio kunye nokuhlelwa, okukhokelela ekubeni ukuphatha lula kwaye kuvumela abasebenzisi ukuba bafumane iziphumo ezilungileyo kwiimveliso zabo.
Sinokufumana ii-tutorials ngaphakathi kwenkqubo apho isifundisa ukuba zeziphi kwaye zisebenza njani izixhobo ezahlukeneyo.
Izinto ezilungileyo zeAdobe Premiere Elements
Ujongano lomsebenzisi olula kakhulu
Iingxaki zeAdobe Premiere Elements
Usenokuba neengxaki zokuhlela kunye nokudlala iividiyo
I-Wondershare Filmora yenye yezona nkqubo zilungileyo zokuhlela ukuqalisa. Sinokufumana iindlela ezimbini, imowudi elula, apho isoftware eyenza wonke umsebenzi, kuba umsebenzisi kufuneka alayishe iziqeshana kunye nomculo kuphela. Kwaye kwelinye icala, kukho imowudi ephezulu, apho sele ikwinkqubo yokuhlela umsebenzisi unokuzimela ngakumbi.
Enkosi kwisixhobo sayo esilula ivumela abasebenzisi be-novice ukuba benze iividiyo ezijongeka njengobuchwephesha, ezinesisombululo esiphezulu ngendlela elula.
Izinto eziluncedo Wondershare Filmora
Inkxaso yeevidiyo ze-4k
Inemowudi yekhamera yesenzo esikhethekileyo
Ukungalungi Wondershare Filmora
Kwinguqulelo yayo yasimahla iividiyo zine-watermark
Ayinakuhlelwa kweekhamera ezininzi
Kukho iinketho ezininzi xa kuziwa kwiinkqubo zokuhlela ividiyo, kwaye ukukhetha enye kufuneka uyithelekise kwangaphambili. Kuya kufuneka uhlalutye ukuba yeyiphi eyona ilungele iimfuno zakho kwaye ke wenze isigqibo malunga neyona ikulungeleyo., ekubeni njengoko sibonile, umahluko phakathi komnye kunye nomnye ubukhulu becala ukusetyenziswa, umrhumo wokuhlawula, ukuhambelana neenkqubo kunye nenani lezixhobo ezinikezela ngazo.
Emva kolu khetho lwezona nkqubo zintlanu zibalaseleyo zokuhlela ividiyo, sinokuthi enye yezona nkqubo zigqibeleleyo nezihlaziyiweyo yiAdobe Premiere Pro CC, kuba ibonelela ngamathuba amaninzi okuhlela, kunye nenzuzo yokuhambelana nabaninzi. Creative izicelo Cloud.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yeyiphi eyona nkqubo ilungileyo yokuhlela ividiyo?